I-Kilmarnock iyazingca ngonxibelelwano lwayo nosapho lakwaMcIlvanney | 1xbet
UBetty Brown, umnini wangoku weGoldberry, uzikhumbula ngokucacileyo iiMcIlvanneys ezimbini. “Le ndawo ihleli kusapho lwam ukusukela ngo-1958 kwaye uHugh noWillie kunye nomntakwabo uNeil babehlala apha. Kwaye nasemva kokuba befumene udumo kunye nempumelelo bahlala bencamathele kwidolophu yabo. UHugh wayengumhlobo omkhulu katata wam kwaye wayeza kungena apha nanini na xa evukile eLondon etyelele usapho okanye egubungela imicimbi yezemidlalo eScotland. Siyazingca kakhulu ngokunxulumana nosapho. ”UHugh McIlvanney: umhlobo, ubukho obukhulu, kunye nomdlali obalaseleyo kwezemidlalo Funda ngakumbi
Ukwazi ngokuqaqambileyo ngemeko yezentlalo nezamashishini ezenza izifundo zakhe zemidlalo. yayingumxholo ophindaphindiweyo kwininzi yeprozi kaHugh kunye nomsebenzi wosasazo.Intshayelelo yakhe kuxwebhu malunga nabaphathi bebhola ekhatywayo baseScotland iveza ubuntu kunye nemfesane ngemeko yabasebenzi bamaqhawe akhe. lonto. Nangona kunjalo ukufumana uluntu oluvelise iBusby, iStein kunye neShankly, kunyanzelekile ukuba uhambe usuka kwisixeko esikhulu eClyde uye kwezinye iindawo apho imisebenzi inqabile ngoku kodwa imigaqo yabantu yayenziwe ngexesha apho le yayi ezona ndawo zinemizi-mveliso enenkqubela phambili ebusweni beMhlaba. ”
I-Kilmarnock kunye nomgangatho wayo wentlalo nenkcubeko kwakubonakala ngathi zibumbe imilinganiselo kaMcIlvanney kunye nobungangamsha beprozi yakhe eqingqiweyo.Impumelelo yakhe, kunye naleyo yomninawa wakhe, ikwashiye ubutyebi obuncomekayo kule dolophu. Iinoveli uZoe Strachan kunye noGraeme Macrae Burnet, owayekhethwe kuluhlu olufutshane lokufumana iMan Booker kwi-2016, uphume apha. Kwaye uLiam McIlvanney, umtshana kaHugh kunye nonyana kaWilliam, naye ube ngumbhali wenoveli ophumeleleyo enekhathalogu yomsebenzi owaziwayo emva kwakhe. Omnye wabo nguStephen Khan, umhleli wewebhusayithi yokuhlalutya iindaba Ingxoxo. Uthe: “UHugh noWillie basikhuthaza sonke.Ngokusisiseko, ukuba ubusuka eKilmarnock kwaye unomdla ongacacanga kulo naluphi na uhlobo lokubhala ubufuna ukufana nabo. kubo uziva ukuba kunokwenzeka. Nanini na xa omnye wethu edibana nabo babesikhuthaza kwaye besinceda. ” I-Kilmarnock FC ibaleka iCeltic kunye neRanger kufutshane nakwitayitile yeligi abagqibela ukuyiphumelela ngo-1965 ngelixa abamelwane i-Ayr United ingoyena mntu ungathandabuzekiyo wabagijimi bangaphambili ukunyuselwa kwinqanaba eliphezulu lebhola laseScotland. Kwilali ekufutshane enemigodi yase-Auchinleck iklabhu yendawo engeyoyeligi, i-Auchinleck Talbot, ifikelele kwi-16 yokugqibela yeNdebe yaseScotland.Bekuya kuba kuhle ukuba ndibone umhleli wezemidlalo oshukumisayo ethumela uHugh ngobuqaqawuli bakhe kwilizwe labazali ukuba ayokujonga ezi zenzo kwaye azenze zibaluleke ngamagama akhe abukhali. ihlala ichazwa ngothando njengesebe lezinto zokudlala. Nawaphi na amaphepha aqulathe umsebenzi kaHugh McIlvanney aphakanyiswa kwangoko kwivenkile yevenkile.